Manchester City Oo Soo Bandhigtay Qiimaha Ay Ku Fasaxeyso Gabriel Jesus
HomeHoryaalka IngiriiskaManchester City oo soo bandhigtay Qiimaha ay ku fasaxeyso Gabriel Jesus
July 18, 2021 Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha 0
Manchester City ayaa lagu soo waramayaa inay 51m ku qiimeysay Gabriel Jesus iyadoo ay jiraan soo jeedino ku aadan in Juventus ay dooneyso inay la soo wareegto weeraryahankan inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.
Citizens ayaa la sheegay in la isha ku heyso heshiisyada Harry Kane iyo Jack Grealish , taas oo ay u badan tahay in ay ugu kaceyso kooxda heysata horyaalka Premier League in ka badan £200m.
Raheem Sterling ayaa lagu soo waramayaa in uu ku jiro liiska iibka , sidoo kale Jesus ayaa loo maleynayaa inuu diyaar u yahay in la iibiyo, iyadoo Juventus la sheegay inay xiiseyneyso saxiixiisa.
Sida laga soo xigtay Calciomercato , Old Lady ayaa isha ku heysa inay heshiis amaah ah kula soo saxiixato ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Brazil iyadoo dooq u heysata inay si joogta ah ugu dhaqaaqdo dhamaadka xilli ciyaareedka soo socda.
Si kastaba ha ahaatee, warbixinta ayaa sheegeysa in Man City ay dooneyso inay iska iibiso weeraryahankeeda isla markaana ay raadineyso qiimo u dhexeeya 51 ilaa 56 milyan oo ginni inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.
Jesus ayaa dhaliyay 82 gool wuxuuna diiwaan galiyay 34 caawin 195 kulan oo uu u saftay Citizens, oo ay ku jiraan 14 gool iyo afar caawin 42 kulan oo uu ka ciyaaray tartamada oo dhan intii lagu jiray ololihii 2020-21.